Chọrọ onye ọka iwu ezinụlọ nke ga-enyere gị aka aka?
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnagide okwu iwu na ngalaba nke iwu ezinụlọ. Okwu iwu kachasị dị na usoro iwu ezinụlọ bụ ịgba alụkwaghịm. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara usoro ịgba alụkwaghịm na ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm na ibe ịgba alụkwaghịm anyị. Na mgbakwunye na ịgba alụkwaghịm, ị nwekwara ike iche maka, dịka ọmụmaatụ, nnabata nke nwa gị, ịjụ ịbụ nne na nna, inweta ikike nke ụmụ gị ma ọ bụ usoro ikuchi…
UGWU AHAMR ATTA AT LAW & MORE
OUKP LR TO TOBARA EGO? Kpọtụrụ anyị
Ndusụk ini emekeme ndinyene nneme ke ibetedem ibetedem. Okwu kachasị n’usoro gbasara iwu ezinaụlọ bụ ịgba alụkwaghịm.
> Agọnarị nne na nna
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ịgba alụkwaghịm na ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm na ibe ịgba alụkwaghịm anyị. Na mgbakwunye na ịgba alụkwaghịm, ị nwekwara ike iche maka, ọmụmaatụ, ịnabata nwa gị, agọnarị nne na nna, ịnabata ikike ụmụ gị ma ọ bụ usoro nkuchi. Ihe ndị a bụ mkpa ọ dị ịchịkwa nke ọma iji gbochie gị ibute nsogbu ma emesịa. You na-achọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na iwu ezinụlọ? Mgbe ahụ ị chọtala ebe kwesịrị ekwesị. Law & More n’enye gi iwu nke ezi na ulo. Ndị ọka iwu iwu ezinụlọ anyị nọ na ndụmọdụ gị.
Na mgbakwunye na okwu metụtara nnabata, njide, ịhapụ nne na nna na nkuchi, ndị ọka iwu iwu ezinụlọ gị nwekwara ike inyere gị aka na usoro metụtara mkpesa na nlekọta nke ụmụ gị. Ọ bụrụ na ị na-emezi otu ma ọ bụ karịa n'okwu ndị a, ọ bụ ihe amamihe dị na ịnwe enyemaka nke onye ọka iwu iwu ezinụlọ ga-enyere gị aka idozi iwu.
Amata na-eme ka iwu nke ezinaụlọ dị n’etiti onye kwetara nwa ahụ na nwa ya. Mgbe ahụ a ga-akpọ di ahụ nna, nwunye bụ nne. Onye kwenyere nwa ekwesighi ibu nna ma obu nne nke nwa ahu. Can nwere ike ikwuputa nwa gị tupu amụọ nwa, n'oge nkwuputa ọmụmụ ma ọ bụ n'oge ọzọ.
Need chọrọ onye ọka iwu ezinụlọ?
Ọnọdụ maka ịnabata nwatakịrị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnabata nwatakịrị, ị ga-emerịrị ihe ole na ole. Iji maa atụ, must ga-adịrị afọ 16 ma ọ bụ karịa tupu ị mata nwa. Mana enwere ọnọdụ ndị ọzọ. Youchọrọ ikike n'aka nne. Ọ gwụla ma nwatakịrị ahụ gbara afọ iri na isii. Mgbe nwatakiri gbara afọ iri na abụọ ma ọ bụ karịa, ịchọrọ ikikere ederede site n'aka nwa ahụ. Na mgbakwunye, ịgaghị anabata nwa ma ọ bụrụ na ahapụghị ịlụ nwanyị ahụ. Iji maa atụ, maka na ị bụ onye ikwu nke nne. Ọzọkwa, nwa ahụ ịchọrọ ịmara nwere ike ọ nwebeghị nne na nna nwere iwu. Enyere gị n'okpuru nlekọta gị? N'okwu dị otu a, you ga-ebu ụzọ chọọ ikike n'ụlọ ikpe mpaghara.
Amata nwatakịrị n’oge afọ ime
Nke a na-egosi nnabata nke nwa e bu n'afọ. You nwere ike ikweta nwatakịrị ahụ na obodo ọ bụla na Netherlands. Ọ bụrụ na nne (onye na-atụ anya) agaghị eso gị, ọ ga-enye ikike ederede maka nnabata. Ndi ibe gi di ime na ejima? Mgbe ahụ nnabata ahụ metụtara ụmụaka abụọ onye di gị dị ime n'oge ahụ.
Amata nwatakịrị n’oge nkwuputa ọmụmụ
I nwekwara ike ikwenye nwa gị ma ọ bụrụ na ị kọọ banyere ọmụmụ. Must ga-ede akụkọ ọmụmụ nke obodo ebe amụrụ nwa ahụ. Ọ bụrụ na nne na-esoghị gị, ọ ga-enye ikike ederede maka nkwenye ahụ.
Childmata nwatakịrị n’oge ọzọ
Ọ na - emekwa mgbe ụfọdụ ụmụaka anaghị anabata ụmụaka ruo mgbe ha toro ma ọ bụ karịa. Ikwuputa ga - ekwe omume na obodo niile dị na Netherlands. Site na afọ iri na abụọ ị ga-achọ ikike ederede site n'aka nwa ahụ na nne ya. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị afọ iri na isii ị ga - achọ ikikere n'aka nwa ahụ.
Họrọ aha mgbe ị na-anabata nwatakịrị
Otu ihe dị mkpa na ịnabata nwa gị, bụ ịhọrọ aha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhọrọ aha nna gị n’oge nkwupute, gị na onye gị na ya ga-aga otu ime obodo ọnụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ gafere afọ iri na isii n'oge a ga-anabata ya, nwa ahụ ga-ahọrọ aha nna ọ ga-achọ inweta.
Ọ bụrụ na inabata nwa, ị ga-abụ nne na nna nwa ahụ. Then ga-enwezi ikike na ikike ole na ole. Iji bụrụ onye nnọchite anya iwu nke nwatakịrị ahụ, ị ​​ga-etinyerịrị maka ikike ndị nne na nna. Inabata nwatakiri putara ihe ndia:
• A na-eme nkekọ iwu n’etiti onye kwetara nwa ahụ na nwa ya.
• I nwere ụgwọ ọrụ maka nwata ruo mgbe ọ ruru afọ iri abụọ na otu.
• Gị na nwatakịrị ahụ ga-abụ onye nketa nke iwu ọ bụla.
• You ga-ahọpụta aha nna ya na nne ya na oge nnabata gị.
• Nwatakịrị ahụ nwere ike nweta obodo gị. Nke a dabere n'iwu nke obodo i nwere obodo.
You ga-achọ ịnabata nwa gị ma ị ka nwere ajụjụ gbasara usoro nnabata? Nwere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọka iwu iwu nwere ahụike.
Agọnarị nne na nna
Mgbe nne nke nwatakiri lụrụ di, di ya ga-abụ nna nwa ahụ. Nke a metụtakwara mmekọrịta mmekọ. O kwere omume ịgọnahụ nne na nna. Iji maa atụ, n’ihi na onye lụrụ di ma ọ bụ nwunye abụghị nna mụrụ nwa ahụ. Nna, nne ya ma obu nwa ahụ nwere ike juo igba ajuju nke nne na nna. Ngọnarị nwere nsonaazụ na iwu echeghị na nna iwu bụ nna. Nke a metụtara azụ. Iwu ahụ na-eme ka nna na nna nke iwu kwadoro adịghị adị. Nke a nwere dịka ọmụmaatụ nsonaazụ maka onye bụ onye nketa ha.
Agbanyeghị, enwere ụzọ atọ ebe ngọngọ nke ịbụ nne na nna na-agaghị (ekweghi ma ọ bụ na ọ gakwaghị):
• Ọ bụrụ na nna iwu bụ nna mụrụ nwa ahụ;
• Ọ bụrụ na nna iwu kwadoro omume nke nwunye ya tụrụ ime;
• Ọ bụrụ na nna nwere iwu amaralarị tupu alụm na nwunye nke ọ lụrụ dị ime.
• Ewezuga nke abụọ n'okwu ikpe abụọ mgbe nne na-ekwesighi n'eziokwu banyere nna mụrụ nwa ahụ.
Mkpesa nke ịbụ nne na nna ka bụ mkpebi dị mkpa. Ndị ọka iwu ezinụlọ nke Law & More dị njikere inye gị ndụmọdụ n’ụzọ kacha mma tupu ị mee mkpebi a dị mkpa.
Anaghị anabata nwatakịrị na-eto eto ime mkpebi ụfọdụ n'onwe ya. Ọ bụ ya mere nwatakịrị ji nọrọ n'okpuru ikike nke nne ma ọ bụ nna. Ọtụtụ mgbe, ndị nne na nna na-ejide ụmụ ha na-akpaghị aka, mana mgbe ụfọdụ ị ga-etinye akwụkwọ maka mkpesa site na usoro ụlọ ikpe ma ọ bụ site na mpempe akwụkwọ.
Ọ bụrụ na i nwere nwatakịrị:
• Ọ bụ ọrụ gị maka nlekọta na ịzụlite nwa ahụ.
• Ọ fọrọ nke nta ka ị bụrụ ọrụ nrụzi, nke pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ nlekọta na agụmakwụkwọ (ruo afọ 18) yana ọnụ ahịa ibi ndụ na ịmụ akwụkwọ (site na afọ 18 ruo 21).
• manage jikwaa ego na ngwongwo nke nwata;
• are bụ nnọchite anya iwu ya.
Enwere ike ịhazi nlekọta nke nwata n'ụzọ abụọ. Mgbe mmadụ jidere, anyị na-ekwu maka njide ejidere onwe ya, na mgbe mmadụ abụọ nwere njide, ọ gbasara njide ejikọtara. Oke mmadụ abụọ nwere ike ijide. Yabụ na enweghị ike itinye akwụkwọ maka ikike ndị nne na nna ma ọ bụrụ na mmadụ abụọ ejidere nwa.
Kedu mgbe ị na-ejide nwatakịrị?
You lụọla di na nwunye ka ọ nwere mmekọ edenyere aha gị? Mgbe ahụ nne na nna ga-ejikọ aka na nwa. Ọ bụrụ na nke abụghị ya, naanị nne ga-enye ya nsogbu. You na alu dika ndi nne na nna mgbe amuchara nwa gi? Ka ị na-abanye na nkwenye edenyere aha gị? N'ụdị ahụ, ị ​​ga-anata ikike nne na nna. Ihe mere ị ga - eji mee bụ na ị nakwere nwa ahụ dịka nna. Iji nweta ikike nne na nna, ị nwere ike ịbụ onye na-erubeghị afọ 18, nọrọ n'okpuru nlekọta ma ọ bụ nwee nsogbu ọgụgụ isi. Nwanyị na-erubeghị afọ 16 ma ọ bụ afọ 17 nwere ike itinye akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka nkwupụta maka afọ iji nweta nwatakịrị. Ọ bụrụ na nne na nna ahụ enweghị ikike, onye ọka ikpe na-ahọpụta onye nlekọta.
Ijidekọ ọnụ mgbe ịgba alụkwaghịm
Ihe ndabere na ịgba alụkwaghịm bụ na nne na nna na-ejikọ aka na-ejikọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụlọ ikpe nwere ike ịhapụ iwu a ma ọ bụrụ maka ọdịmma kachasị mma nke ụmụaka.
Ichoro ka ichota umu gi ma obu inwe ajụjụ ndi ozo banyere ikike nne na nna? Biko mee kpọtụrụ otu onye ọka iwu ezinụlọ anyị nwerela ahụmahụ. Obi dị anyị ụtọ iso gị na-eche ma nyere gị aka itinye akwụkwọ maka ikike ndị nne na nna!
Onye ọ bụla chọrọ ịmụta nwatakịrị na Netherlands ma ọ bụ site na mba ọzọ ga-enwerịrị ụfọdụ ọnọdụ. Iji maa atụ, you ga-adi obere afọ 18 ka nwatakịrị ị chọrọ ịmụta. Ọnọdụ iku nwa site na Netherlands dị iche na ọnọdụ ime ka nwatakịrị si mba ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, nkuchi na Netherlands chọrọ ka nkuchi ahụ bụ maka ọdịmma kachasị mma nke nwatakịrị. Na mgbakwunye, nwa ahụ ga-abụrịrị nwata. Ọ bụrụ nwatakịrị ahụ ịchọrọ iku dị afọ iri na abụọ ma ọ bụ karịa, a ga-achọ nkwenye ya maka nkuchi ahụ. Na mgbakwunye, otu ọnọdụ dị mkpa maka nkuchi nwa site na Netherlands bụ na ị lekọtara ma zụlite nwa ahụ ọbụlagodi otu afọ. Dịka ọmụmaatụ dịka nne na nna, onye nlekọta ma ọ bụ nne na nna.
Maka nkuchi nwatakịrị site na mba ofesi, ọ dị mkpa na ị ruobeghị afọ iri anọ na anọ. Ọzọkwa, ọnọdụ ndị a metụtara nkuchi nwatakịrị si mba ọzọ:
• Gị na onye gị na ya ga-enye ikike inyocha Usoro Ndekọ Ikpe (JDS).
• Ọdịiche nke afọ dị n’etiti nne na nna kuchiri ya na nwa ahụ agaghị agafe afọ 40. N'ọnọdụ ndị pụrụ iche, aga - ewezuga ihe dị iche.
• Ahụike gị nwere ike ọ gaghị abụ ihe mgbochi maka ikuchi nwa. Ga-enwerịrị nyocha ahụike.
• must ga-ebi na Netherlands.
• Site na mgbe nwa ahụ si mba ọzọ kwabata na Netherlands, iwu ji ka ị na-akwụ ụgwọ maka nlekọta na ịzụlite nwata ahụ.
Mba ebe nwatakịrị kuchiri si n’aka ya nwekwara ike ịmanye ọnọdụ nkuchi. Iji maa atụ, gbasara ahụike gị, afọ ma ọ bụ ego ị na-akpata. Na ụkpụrụ, nwoke na nwanyị ga-amụrụ nwa site na mba ọzọ ọnụ ma ọ bụrụ na ha lụrụ.
Ichoro iku nwata site na Netherlands ma obu site na mba ofesi? Ọ bụrụ otu a, mee ka a mara nke ọma gbasara usoro a na ọnọdụ niile akọwapụtara ọnọdụ gị. Ndị ọka iwu ezinụlọ nwere nke Law & More dị njikere inye ndụmọdụ ma nyere gị aka n'oge usoro a.
Ntughari bu ihe di egwu. Enwere ike iji ya mee ihe mgbe ọ ka mma maka nchebe nke nwa gị ibi na ebe ọzọ ruo nwa oge. Nlele na-aga n'ihu na-elele anya. Ebumnuche maka ịpụpụ bụ iji hụ na nwa gị nwere ike ibi n’ụlọ ọzọ oge ụfọdụ.
Ndi Ntorobịa ma ọ bụ Kọmitii Ilekọta na Nchedo Childmụaka nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa ịhapụ nwa gị n'ụlọ. E nwere ụzọ dị iche iche esi apụta. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike idobe nwa gị na ezinụlọ nkuchi ma ọ bụ n'ụlọ nlekọta. O nwekwara ike ikenye nwa gị ezinụlọ ya.
N’ọnọdụ dị otu a, ọ dị mkpa na ịnwere ike iwere onye ọka iwu ị tụkwasịrị obi. Na Law & More, ọdịmma gị na nke nwa gị bụ ihe kacha mkpa. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na usoro a, dịka ọmụmaatụ iji gbochie ịhapụ ịkpọpụ nwa gị n'ụlọ, ị gaala ebe kwesịrị ekwesị. Ndị ọka iwu anyị nwere ike inyere gị na nwa gị aka ma ọ bụrụ na ekenyela arịrịọ maka nlepụ anya, ma ọ bụ nwee ike itinye ya n'aka Onye ọka ikpe ụmụaka.
Ndị ọka iwu ezinụlọ nwere nke Law & More nwere ike iduzi ma nyere gị aka ịhazi akụkụ niile nke iwu ezinaụlọ n'ụzọ kacha mma. Ndị ọka iwu anyị amatala ihe gbasara iwu gbasara ezinaụlọ. You na achọ ịmata ihe anyị ga - emere gị? Biko kpọtụrụ Law & More.